Jehovha anoramba kunzwa chikumbiro chaZedhekiya (1-7)
Vanhu vanofanira kusarudza upenyu kana kuti rufu (8-14)
21 Jeremiya akagamuchira shoko kubva kuna Jehovha, Mambo Zedhekiya+ paakamutumira Pashuri+ mwanakomana waMarikija naZefaniya+ mwanakomana waMaaseya, mupristi, achiti: 2 “Tapota tibvunzire kuna Jehovha, nekuti Mambo Nebhukadhinezari* weBhabhironi ari kurwa nesu.+ Zvichida Jehovha achatiitira rimwe remabasa ake anoshamisa, zvekuti iye acharega kutirwisa.”+ 3 Jeremiya akati kwavari: “Udzai Zedhekiya kuti, 4 ‘Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: “Ndiri kuita kuti zvombo zvehondo zviri muruoko rwenyu zvikurwisei,* izvo zvamuri kurwisa nazvo mambo weBhabhironi+ nevaKadheya vakakukombai vari kunze kwerusvingo. Uye ndichazviunganidza* pakati peguta rino. 5 Ini pachangu ndicharwa nemi+ neruoko rwakatambanudzwa, neruoko rune simba, ndakatsamwa, ndiine hasha uye ndakagumbuka kwazvo.+ 6 Ndicharova vagari vemuguta rino, zvese vanhu nemhuka. Zvichafa nedenda guru.”’*+ 7 “‘“Kana izvozvo zvapera,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “ndichaisa Mambo Zedhekiya weJudha nevashandi vake nevanhu veguta rino, kureva vaya vachapona padenda, pabakatwa, uye panzara, muruoko rwaMambo Nebhukadhinezari* weBhabhironi, mumaoko evavengi vavo, uye mumaoko evaya vari kutsvaga kuvauraya.*+ Iye achavauraya nebakatwa. Haazovanzwiri urombo, uye haazovanzwiri tsitsi kana kuvanzwira ngoni.”’+ 8 “Uti kuvanhu ava, ‘Zvanzi naJehovha: “Ndiri kuisa nzira yeupenyu nenzira yerufu pamberi penyu. 9 Vaya vanoramba vari muguta rino vachaurayiwa nebakatwa, nenzara, uye nedenda. Asi munhu anobuda uye anoenda kunozviisa mumaoko evaKadheya vakakukombai acharamba achirarama, uye achava neupenyu hwake* sechinhu chaapamba.”’*+ 10 “‘“Nekuti ndatarisa guta rino kuti ndiriunzire dambudziko, kwete zvakanaka,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Richaiswa muruoko rwamambo weBhabhironi,+ uye acharipisa nemoto.”+ 11 “‘Imi imba yamambo weJudha: Inzwai shoko raJehovha. 12 Haiwa imi imba yaDhavhidhi, zvanzi naJehovha: “Tongai zvakarurama mangwanani ega ega,Uye nunurai ari kubirwa paruoko rweanobiridzira,+Kuti kutsamwa kwangu kurege kunganduma semoto+Kwobvira pasina anodzimaNemhaka yezvakaipa zvamunoita.”’+ 13 ‘Ndiri kukurwisa haiwa iwe mugari wemubani,Haiwa iwe dombo renyika yakati sandara,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Asi kunemi munoti: “Ndiani achadzika kuzotirwisa? Ndiani achapinda nechisimba matinogara?” 14 Ndichaita kuti muzvidavirireMaererano nemabasa enyu,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Ndichabatidza sango rake nemoto,Uye iwo uchaparadza zvinhu zvese zvakamupoteredza.’”+
^ Kana kuti “zvikudzokerei.”
^ Kana kuti “ndichaunganidza vanhu vacho.”
^ Kana kuti “nechirwere chakaipisisa.”
^ Kana kuti “achatiza neupenyu hwake.”